नेपाली लोक गीतको क्रेज विदेशमा अझ बढी छ: लोक गायक पूर्ण परियार,अष्ट्रेलिया - Himalayan Kangaroo
नेपाली लोक गीतको क्रेज विदेशमा अझ बढी छ: लोक गायक पूर्ण परियार,अष्ट्रेलिया
Posted by Himalayan Kangaroo | ४ कार्तिक २०७३, बिहीबार ०६:११ |
मेलबर्न । लोक संगीत क्षेत्रका लागि पूर्ण परियार परिचित नाम हो । उनको ढाँटी ढाँटी’ र बुट्टे चोली लगायतका एल्वमहरु प्रकाशन भएका छन् । उनको पछिल्लो एल्वम बुट्टे चोलीको म्युजिक भिडियो यतिखेर युट्युव लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा लोकप्रिय बनिरहेको छ ।
म्युजिक भिडियोको निर्देशन शंकर विसीले गरेका छन् । म्युजिक भिडियोमा शंकर विसी र पार्वती राईले अभिनय गरेका छन ।
विगत १ दशक देखि अष्ट्रेलिया बस्दै आएका परियार अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज क्विन्सल्याण्डको महासचिव समेत हुन् । यस्तै बुन्डोल लाईन्स क्लवको कोषाध्यक्ष समेत रहेका पूर्णले अष्ट्रेलियामा स्विमिङ्ग क्लास लिने गर्छन् । नेपालको लमजुङमा जन्मेका उनै लोकगायक परियारसँग हिमालयन कङ्गारुको जम्घाभेट भएको छ :
म्यूजिक भिडियो त निकै राम्रो बनाउँनुभएछ । कहाँ छायांकन गर्नुभयो ?
धादिङ्को गल्छीमा ।
तपाईको लोक गायन यात्राको अविस्मरणीय क्षण ?
जब म आफ्नो गीत रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड गराइरहेको थिएँ । बाहिर बसेर मन्द मुस्कान सहित वरिष्ठ लोक संगीतकार तथा गीतकार एकनारायण भण्डारीले सिकाइरहनु भएको थियो । त्यो क्षण मेरो लागि अविस्मरणीय बनेर रहेको छ ।
कहिलेदेखि गीत संगीतको मोहले तान्यो ?
म सानैदेखि गीत संगीत भनेपछि हुरुक्क हुन्थें । त्यतिखेर म सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेइमान गर्छ कि जिन्दगानीमा भन्ने गीत खुब गाउँथें ।
तपाईलाई मनपरेको कुनै गीत ?
मलाई गायक रामजी खाँडले गाउँनुभएको हावा चल्यो सररर भन्ने गीत साह्रै मन पर्छ ।
गीत गाउन त्यति धेरे दर्शकहरुको अगाडि माइक बोकेर उभिदा नर्भस अनुभव हुँदैन ?
अहँ हुँदैन । माइल लिएर दर्शकको अगाडि जान पाउँदा म त अझ उत्साहित पो हुन्छु ।
अष्ट्रेलिया आउनुभएको कति भयो ?
म विगत आठ वर्षदेखि अष्ट्रेलियामा छु ।
अष्ट्रेलियाको व्यस्त जीवनशैलीमा गीत संगीतलाई कसरी समय दिइरहनुभएको छ ?
गीत संगीत मेरो जीवनकै प्यासन हो । त्यसैले जति नै व्यस्त भए पनि यसका लागि जसरी पनि समय निकालेकै छु ।
तपाईलाई कुन बाजा मन पर्छ ?
मलाई किबोर्ड र पञ्जेबाजा मन पर्छ ।
नेपाली लोक संगीतप्रतिको श्रोता दर्शकको मोह घट्दै गएको भन्ने सुनिन्छ,कतिको सत्य हो ?
त्यो विल्कुल होइन । किनभने नेपालमा मात्र होइन जहाँ जहाँ नेपालीहरु पुगेका छन्,नेपाली लोक गीतप्रतिको उनीहरुको मोह उत्तिकै रहेको पाउँछु । उदाहरणका लागि नेपाल होस् कि विदेशमा हुने विवाह,जमघट वा कुनै सांस्कृतिक कार्यक्रम,त्यहाँ सबभन्दा बढी लोक गीत नै गुञ्जिने गर्दछ ।
गायक गायिका बन्न चाहनेहरुलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ ?
गीत संगीत भनेकै साह्रै रमाइलो क्षेत्र हो । तर सिकेर र जानेर आउँदा राम्रो । म पनि अझै सिकिरहेको छु ।
Previousनेपालका लागि भारत न’महान’ न त ‘खराब’ !
Nextनयाँ शक्तिमा जिम्मेवारी हेरफेर (कसलाई कुन जिम्मेवारी ?)
नन्दिता केसी र दिलिप रायमाझी लोग्ने स्वास्नी ?
३ श्रावण २०७१, शनिबार १५:५०
मधेसी समुदाय भिक्टोरियाको नयाँ कार्यसमिति चयन, अध्यक्षमा डा. सुरेन्द्र रौनियार
२ पुष २०७६, बुधबार ०५:५८
१६ श्रावण २०७१, शुक्रबार ०६:१०